Zimbabwe Starts Dumping Defunct Currency
The process, which will end in September, officially invalidates the old currency that was ravaged by hyperinflation of up to 500 billion percent.
Zimbabweans on Monday started selling the now defunct local currency at banks in a $20 million demonetization process.
The process, which will end in September, officially invalidates the old currency that was ravaged by hyperinflation of up to 500 billion percent before the adoption of multiple currencies in 2009.
Central bank governor John Mangudya said he hopes dumping the currently will put to rest speculation of a return of the Zimbabwe dollar as denominations of up to $100 trillion are fetching as much as $35 on online sites like eBay.
Interview With John Mangudya on Demonitization
Local banker and former president of the Bankers Association of Zimbabwe, John Mushayavanhu, welcomed the move.
Interview With John Mushayavanhu on Demonitization
Also weighing in, economist prosper Chitambara of the Labour and Economic Development Institute of Zimbabwe, said the move is a little late.
Interview With Prosper Chitambara on Demonitization
The Reserve Bank of Zimbabwe is buying the old currency for up to $2 for some currencies.